လိမ္မော်ရောင်သည် New Black's Laura Gómez Blanca ရှိရာသီ ၃ ဖြစ်သည် - Netflix မူရင်း
လိမ္မော်ရောင် Blanca, ရာသီ3နှင့် Netflix ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်အသစ်က Black ရဲ့လော်ရာဂိုမက်
Marvel ရဲ့ AKA ဂျက်စီကာဂျုံးစ်ယခု Marvel ရဲ့ဂျက်စီကာဂျုံးစ်ဟုခေါ်တွင်သည် Baz Luhrmann ရဲ့ The Get Down Jaden Smith ကထပ်ပြောသည် Netflix မူရင်း က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
Netflix Original စီးရီးတွင် Blanca Flores ကိုကစားသော Laura Gómezနှင့်အတူအဖြေများ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည်
လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် လော်ရာဂိုမက်ဇ်က Netflix Life အတွက်ဇွန်လ ၁၂ ရက်ရာသီအတွက်ရာသီ3Premiere သို့ ဦး တည်နေသည့်မေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုဖြေဆိုရန်လုံလောက်သည်။
စီးရီးတွင်Gómezသည် Blanca Flores ကိုတီးခတ်သည်။ သူသည် Diablo ကိုအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်သူမ၏ရည်းစားနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိဖုန်းကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းကြောင့်လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။
သူမသည်အခြားဇာတ်ကောင်များထက်အကျဉ်းထောင်တွင် ပိုမို၍ သီးသန့်အခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်နေစဉ် Blanca သည်အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်အများစုလိုပဲ Blanca ဟာမျက်လုံးနဲ့ဆုံတာထက်အများကြီးပိုလုပ်ပါတယ်။
အကျဉ်းထောင်အတွင်းသူမ၏အခန်းကဏ္, နှင့် Blanca ကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပြပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Blanca နှင့် ပတ်သက်၍ Gómezကိုကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းခဲ့သည်။ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ။
လူစီဖာရာသီ5လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ 2019
Netflix Life: ခင်ဗျားဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာလဲ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ?
လော်ရာဂိုမစ်။ ။ ဒါကသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲ။ ငါအကြောင်းကိုသိပ်မသိသောအခန်းကဏ္ for များအတွက်စာရင်းစစ်ရန်, ငါ့ထို့နောက် - ကိုယ်စားပြုမှုအားဖြင့်ငါ့ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သိသမျှအားလုံးက Jenji Kohan အတွက်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးငါသိဖို့လိုသမျှပဲ။
ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်သိပ်မများဘူး။ Netflix သည်စျေးကြီးလာခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်အရာအားလုံးသည်အလွန်အသစ်၊ အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ ငါကကြီးမြတ်ခဲ့ပေမယ့်သင်ကအခန်းကဏ္ for များအတွက်တော်တော်လေးဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကတစ် ဦး အကြီးအပြပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်, နှင့်အခြားအခန်းကဏ္ be ရှိစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်သူကစိုးရိမ်ပူပန်သူကပြောသည်သူ Jen Euston များအတွက် auditioned ။
ဒီတော့ငါထွက်သွားပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်၊ သူတို့ကငါပိုင်တယ်ဆိုတာကိုလာပြီးနောက်အပတ်မှာစမယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါကအတိုချုပ်ပြောရရင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးပါပဲ။
Michael Jaffe ဓါတ်ပုံ
သူမကအများကြီးပြောင်းလဲမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Blanca ရုံရယ်စရာပါပဲ။ မူလကသူမအရူးအဖြစ်ရိပ်မိသောဤထူးဆန်းတစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူ့ကိုသူမကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မယ်။ ရှင်သန်ရပ်တည်ရန်ကြိုးစားနေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမတွင်ထောင်ထဲတွင်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများရှိသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကသူ့ကိုယ်သူတစ်ယောက်တည်းနေနေရအောင်သူရူးနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေတယ်။
ငါ Blanca ကိုဖော်ပြရန်စကားလုံးတစ်လုံးပေးရလျှင်ရှုပ်ထွေးလိမ့်မည်။
ငါအတွက်, Blanca တစ်လမ်းအတွက်ပါရမီနှင့်တူနီးပါးပုံရသည်။ သူမတစ်ယောက်တည်းနေလိုလျှင်အရူးလုပ်ခြင်းသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သဘောတူမလား
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါကသူမ၏ကာကွယ်ရေးယန္တရားဖြစ်သကဲ့သို့, အချိန်များတွင်, ဒီစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းခြင်းနည်းလမ်း၊ သူမမည်သို့ကိုင်တွယ်နိုင်သည်၊ သူမဖြတ်သန်းသွားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Blanca သည် SHU (တစ်ကိုယ်ရေထိန်းသိမ်းခံထားရသောလုံခြုံရေးအိမ်ရာယူနစ်) သို့ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။ ထိုအကြိမ်ပေါင်းမည်မျှဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ
Netflix update ကိုပြပွဲမရသောအခါ
ငါတီထွင်ဖန်တီးမှုအခန်းကဏ္ into သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစား, Blanca အခြေခံအားဖြင့်, ထို၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမည်သည့်သဲလွန်စများပေးနိုင်လျှင်, ရာသီ3အတွက် Blanca များအတွက်စတိုးဆိုင်၌အဘယ်သို့ဆိုင်?
မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါအများကြီးမပေးနိုင်ဘူး၊ Netflix ရဲကငါ့နောက်ကိုလိုက်လာမယ်။ [ရယ်သံများ]
ငါ Blanca နေဆဲသူမဖြစ်အထူးထူးဆန်းတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဟုဆိုသည်။ ငါသူမပိုကြီး Latina ဂိုဏ်းအတွင်းတစ်ခါတလေရုပ်ပြကယ်ဆယ်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဟုဆိုလိမ့်မယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့ 'အခြားသွန်းအဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့်အတူလှည့်လည်' 'Blanca လာမယ့်အတူတက်လာမယ့်ကဘာလဲ' 'သူမအမြဲဤလိုက်တယ်အပြန်အလှန်ရှိခြင်းရဲ့။
လက်တင်အမေရိကနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရှိပြီး Blanca သည်အုပ်စုတွင်လက်ခံခဲ့သည်နှင့်တူသည်။ ဒါဟာငါ (Blanca) အုပ်စုတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ, ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီမှာဖြစ်စိမ်းလန်းသောကဒ်ရှိသည်ကဲ့သို့တစ်လမ်းအတွက်လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါပိုင်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ငါ Latina ဂိုဏ်းနှင့်အတူဖြစ်၏ဘယ်မှာကြောင်းပါပဲ။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါ Blanca မှာကောင်းမွန်သောအချိန်များများရှိသည်။ Blanca ဟာအထီးကျန်ဆန်ပြီးနည်းနည်းလေးထူးခြားတဲ့အချိန်တစ်ခုရှိတယ်။ Blanca အတွက် Pennsatucky နဲ့ Crazy Eyes တို့လိုအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ပေမယ့်သူက Pennsatucky လိုလူတစ်ယောက်ထက်အများကြီးခြားနားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါတို့ဂိုဏ်းအတွက်အတော်လေးမကိုက်ညီသောလူများကဲ့သို့ဖြစ်၏။ Blanca သည် Latina ဂိုဏ်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
သို့သော်ငါထင်, ရာသီ 2, ငါ့အဘို့, အမြိုးမြိုးသောကွောငျ့ဤ Vee ဇာတ်ကောင်များ၏စည်းလုံးခဲ့ကြရသောရာသီဖြစ်ခဲ့သည်။ Vee ဒီငါးမန်းကြီးနှင့်လူတိုင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမ၏အနွယ်အဖြစ်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ Blanca ကြင်ကြင်နာနာသူမ၏အုပ်စုထဲသို့လက်ခံသောအခါ, သူမမီးဖိုချောင်သို့ရောက်လာ။ , Latina ဂိုဏ်းအကြားအမိုးအကာကဲ့သို့၎င်း, ပေးခဲ့သည်အခါ။ ထိုမိန်းမသည်အားဖြင့်ရရှိသွားတဲ့။
နောက်ကျောရာသီ 1 အတွက်, သင်ထင်ခဲ့ပေ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် စတုတ္ထရာသီသို့ ဦး တည်နေသကဲ့သို့ယနေ့ခေတ်လောက်အောင်မြင်နိုင်မည်လား။
အစပိုင်းမှာပြပွဲကဒီအောင်မြင်မှုကိုလူတိုင်းအံ့အားသင့်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ပြပွဲကအောင်မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့်ဒီပြပွဲကဒီအောင်မြင်မှုဖြစ်လာတယ်။ ဆိုလိုတာကကမ္ဘာလောကရဲ့အောင်မြင်မှုပါ။ ငါတွစ်တာပေါ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှမက်ဆေ့ခ်ျများရသည်သာမကရိုမေးနီးယားကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားလိုသည့်နိုင်ငံများမှပင်သတင်းများရရှိသည်။ ရိုမေးနီးယားမှာမင်းကိုချစ်တယ် အားလုံးလက်တင်အမေရိက, နေရာတိုင်း။
ငါကဂျာမန်လိုမင်းရဲ့အသံပဲလို့ပြောတဲ့ကောင်မလေးကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာစာရှိတယ်။ စပိန်နိုင်ငံက“ ငါတို့ကပွဲကိုကြိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဒါကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ကြည့်တယ်၊ အဲဒါကငါဘာသာပြန်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကြည့်နေတုန်းပဲ။
ဒါဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊ ပြီးတော့လူတိုင်းအံ့အားသင့်သွားတယ်ထင်တယ်။ Jenji ကအံ့အားသင့်သွားတယ်ထင်တယ်။
အိုးအဲဒီမှာဤမျှလောက်ပါပဲ, ဒါပေမယ့်ငါသရုပ်, စာရေးဆရာများ, ခြုံငုံထုတ်လုပ်မှုသာဒီပါရမီ, ပါရမီ, ပါရမီသွန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှင့်ပြောသာပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအကောင်းဆုံးအရာတစျခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်းဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်အပေါ်တစ် ဦး ဂိမ်း - changer ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည်ထိုအခွင့်ထူးကိုခံစားရခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရုံသာမကကြီးထွားမှုကိုမြင်တွေ့ရန်အစမှပင်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်အလွန်အခွင့်ထူးခံသည်ဟုခံစားရသည်။
ပြီးတော့ဂျန်ဂျီဆိုတာငါအရမ်းမျှော်ကြည့်တဲ့သူ၊ အခုတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးပေါ့။ ကျနော်တို့အစုပေါ်ပါတယ်, ဒီမှာတကယ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကကင်မရာနောက်မှာမိန်းမတွေရှိတယ်။ သူမသည်အမျိုးသမီးများသာမကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးမပြုနိုင်သောအမျိုးသမီးများသာမကအမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည်။ လူမျိုး၊ အရောင်နှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးသည်သူမအတွက်ရိုက်ချက်များနှင့်အမျိုးသမီးဒါရိုက်တာများကိုခေါ်ဆိုသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်လှပသည်။ နှင့်ငါကချစ်ကြတယ်။ ငါစက်မှုလုပ်ငန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, တစ်လမ်းအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အသွင်ပြောင်းတစ်ခုခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကိုချစ်။
အဲဒီမှာတိုးတက်မှုပြခဲ့ပါတယ်, အဲဒီမှာလုပ်နေကြသူအခြားလူများနှင့်ဖန်တီးသူလည်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီပြပွဲတကယ်ဘားကြီးပြင်းခဲ့သည်။
netflix အပေါ် flash ရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
မှန်ကန်သောဖော်မြူလာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်းသည်သမိုင်းကိုမှားယွင်းကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာငါတို့အများစုမှာအမျိုးသမီးတွေသရုပ်ဆောင်ထားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတွေပြသနေတယ်။ လူနည်းစုများစွာ။ ထိုလူအပေါင်းတို့၏အများဆုံး, ဇာတ်ကောင်အများအပြား, သူတို့ကအချို့သောအံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များရှိခဲ့ပါတယ်သော်လည်း, သူတို့သည်အမှန်တကယ်အမည် - သရုပ်ဆောင်များကိုမဟုတ်ပါဘူးသင်သိ? နှင့်အညီ, နေဆဲ, ပြပွဲဒီကမ္ဘာကြီးကိုဖြစ်ရပ်ဆန်းသို့လှည့်။
ငါပြောတာကဇာတ်လမ်းအကြောင်း၊ လူတွေဟာဒီအမှန်တရားကိုဆာငတ်နေကြတယ်ဆိုတာသက်သေပြတာပဲ။ အမည်များအရေးမပါဘူး။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ပြပွဲရဲ့အရည်အသွေးပဲ။ ဒါပေမယ့်နေဆဲငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာရှိသည်သောဤစိတ်ကူးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်လုပ်တယ်ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲမျိုးကဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာရဲ့ငါ့ကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ... အပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်။
ငါပြပွဲကိုကြည့်ကြဘူး [ရယ်သံများ] ငါကြိုက်တယ် ငါမကျင့်သောသူတို့သည်လူတွေရှိတယ်သိကြဘူး, ငါမတိုင်မီကြောင်းအခွအေနေ၌ရှိသောကြောင့်ငါနားလည်ပါတယ်။ သင်အလုပ်ကိုအလွန်အကျွံစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောအရာကားကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်ငါခံစားချက်မပြတ်သောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသွန်းကိုသိသောအချက်ကို၏ပြတ်တောက်မသွားဘူး, ဒါမှမဟုတ်ငါဇာတ်လမ်းကိုသိသို့မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတစ်ခါတစ်ရံငါ့ကိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်အဆက်ဖြတ်မ။
ဒါဟာငါ့ကိုရန်အလွန်အစွမ်းထက်ရဲ့, ငါအဆက်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ခြုံငုံ, အရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်တယ်။ ငါသည်ဤပြပွဲအခြားအရာတစ်ခုခုကိုသိသည့်အခါပါပဲ။
ငါကနည်းနည်းပိုပြီးစိတ်ရှည်တယ်။ ငါအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်ပေမယ့်သူတို့ကိုအနည်းငယ်ဖြန့်ဝေကြိုက်တယ်, အထူးသဖြင့်ပြပွဲဘယ်မှာသိသောကြောင့်။ ငါကြည့်ဖို့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ယူလို။ နှစ်ပတ်သို့မဟုတ်သုံးပတ် ... ကျွန်ုပ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်စေသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ။ အများဆုံး, ငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုကြည့်။
စာရင်းဆက်လက်ကြည့်ရှု Netflix ဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
မင်းခေါ်တဲ့ HBO Miniseries အသစ်မှာမင်းမှာအခန်းကဏ္ have ရှိတယ် ငါ့ကိုသူရဲကောင်းပြပါ ။ ဒီ ၀ န်ကြီးဌာနတွေမှာမင်းရဲ့အခန်းကဏ္aboutကိုမင်းတို့ဘာပြောနိုင်မလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်တစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားသောအရာများထဲကတစ်ခုပဲ။ ဒီအရည်အချင်းရှိသူတွေအားလုံးနဲ့ပြပွဲမှာကျွန်ုပ်မှာအခန်းကဏ္ have ရှိသည်။ ငါ Jenji Kohan နဲ့အလုပ်လုပ်တာက David Simon နဲ့အတူအလုပ်လုပ်တာပဲ။ ဒါဟာအရမ်းအရူးရဲ့, ငါကအကြောင်းဒါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
ငါ့ကိုသူရဲကောင်းပြပါ အံ့သြဖွယ်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်ဘာသာစကား -based ပြသအမျိုးအစား။ ဒါဟာနှင့်အညီအလွန်နိုင်ငံရေးပါပဲ အဆိုပါဝါယာကြိုး နှင့်လူမျိုးရေးပုံပြင်များအများကြီးပရောဂျက်, ထိုသို့အခြေခံအားဖြင့်ဒါဟာနှောင်းပိုင်း '' 80s အတွက် Yonkers (နယူးယောက်) တွင်ဖြစ်ပျက်သောအခွအေနေအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
၎င်းသည်မြို့တွင်းရှိလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအကြောင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စာအုပ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည် ငါ့ကိုသူရဲကောင်းပြပါ ၎င်းသည်အားလုံး၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရာဇဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Paul Haggis မှညွှန်ကြားထားသည်။ ၎င်းသည်အော်စကာ Isaac ဇာက်၊ ကက်သရင်း Keener နှင့်အခြားအံ့သြဖွယ်သရုပ်ဆောင်များကိုသရုပ်ဆောင်သည်။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအံ့သြဖွယ်သွန်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့်ခြောက်ပိုင်းပါ ၀ င်သော ၀ န်ကြီးဌာနများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ယခုလုပ်ဆောင်နေသည့်အခြားအရာတစ်ခုရှိပါသလား လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် နှင့် ငါ့ကိုသူရဲကောင်းပြပါ ?
Catherine Curtin (Wanda) ကနေသရုပ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်တိုတိုလေးကိုငါပဲရိုက်ကူးခဲ့တယ် လိမ္မော်သီး ထို့အပြင်ဒါကြောင့်ငါက၏ ဦး ဆောင်ဘို့သူမ၏ရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအခြားနေ့ကပြီးဆုံးပြီ, ယခုငါတို့ပွဲတော်များကိုသွားမယ့်ပါတယ်။ ငါကပိုစိတ်လှုပ်ရှားမဖြစ်နိုင်!
Laura Gómezကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်စကားပြောခြင်းအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Twitter ပေါ်ကလော်ရာကိုသင်သေချာအောင်လုပ်ပါ ( @lg_lauragomez ) နှင့်သူမ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ထုတ်စစ်ဆေးပါ www.lauragomez.net သူမ၏ဘဝ၊ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းနှင့်သူမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်တို့ကိုအသစ်အဆန်းများအတွက်!
နောက်တစ်ခု:OITNB မှ Alysia Reiner နှင့်အတူ Q & A
အဆိုပါမွေးမြူရေးခြံအပိုင်း7ပြန်လည်သုံးသပ်
၂၀၁၅ နို ၀ င်ဘာလတွင် netflix ထွက်ခွာသွားခြင်း
Star Trek ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုအ Netflix